Madaxda gobolka Mudug oo shir la yeeshay madaxda dadka soo barakacay, lagu gorfeeyey amniga gobolka. – Radio Daljir
Diseembar 16, 2009 12:00 b 0
Galkacyo Dec 16 – Shir ballaaran oo ku saabsan nabadgalyada guud ee gobolka Mudug gaar ahaanna midda magaalada Galkacyo ayaa maanta lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Mudug.
Shirkaan oo ahaa mid lagu falanqaynayey xaaladda ammaan ee gobolka, ayaa waxaa si wadajir uga qaybgalayey maamulka gobolka, midka degmada Galkacyo, guddiyada nabadgalya gobolka, saraakiisha amniga ee isla gobolka, guddiyada iyo odayaasha dhaqanka ee dadka baracayaasha ah ee ku dhaqan gobolka Mudug.
Shirkaan oo ay ujeeddadiisa ugu weyni ahayd sidii maamulka dawladda, dadka deegaanka iyo kuwa barakacayaasha ahi ay iskaga kaashan lahaayeen adkaynta amniga gobolka gaar ahaan midda magaalada Galkacyo oo ay ku sugan yihiin barakacayaal tiradoodu ay aad u badan tahay.
Mas?uuliyiinta kulankaasi ka hadlay maanta waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo isaga laftigiisu lahaa qorsha qabsoomidda shirkaan, waxaana uu sheegay sida ay lama maarmaanka u tahay is-kaashi buuxa oo laga yeesho adkaynta iyo xoojinta ammaanku gobolka.
Guddoomiyuhu waxaa si faahfaahsan uga warramay siyaasadda Puntland ee ku aaddan dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaannada Puntland, waxaana uu tilmaamaay dhammaan dadka Soomaaliyeed in ay u siman yihiin dhulkaPuntland, Puntland-na ay ka go?antahay soo dhaweynta iyo taakulaynta dadka tabaalaysan sidaas darteedna aysan marna raalli ka ahayn in wax dhibaato ah loo gaysto.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud X Xasan, uu shirkaasi maanta si kulul uga hadlay ayaa sheegay ammaanka gobolka in xil ka saaran yahay qofkasta oo ku nool gobolka ama leh dareen muslimnimo ama mid wadanimo, wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday maamulkiisu in uu ahmiyad gaar ah siiyo siinna doonan dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Galkacyo aysanna marnaba ogolaananayn in waxyeello loo gaysto.
Waxaa duqu uu ka codsaday, guddiyada iyo odayaasha ka socday barakacayaasha in ay qayb weyn ka qaataan adkaynta amniga iyo nabadgalyada gobolka, isla markaana ay soo sheegeen cidkasta oo ay u arkaan in ay wax u dhimayso xasiloonida gobolka.
Xaaji Gaani Axmed Nuur, oo ka mid ahaa odayaasha ku hadlayey magaca dadka barakacayaasha ah ayaa ku dheeraaday sida ay u jecel yihiin nabadda gobolka, waxaana sheegay halkaan in ay u yimaadeen nabadda taalla oo kaliya sidaas darteedna aysan raalli ka ahayn cidkasta oo ku dhax dhuumanaysa isla markaana waxyeellaynaysa amniga.
Kulankaan maanta ee ay sida wadajirka ah u yeesheen maaamulka dawladda ee gobolka Mudug iyo guddiyada iyo odayaasha dhaqan ee dadyowga barakacayaasha ah ayaa yimid kadib markii ay dhaceen falal meel ka dhac ku ah nabadgalya kuwaasi oo badan koodu ka dhacay magaalada Galkacyo dhaxdeeda, waxaana falalkaasi ay horseed u noqdeen tuhan iyo shaki soo kala dhaxgalay dadka deegaanka iyo kuwa ka yimid gobollada kale ee dalka.
Dhawrkii maalmood ee ugu danbeeyey waxaa jiray hanjabaado iyo cago-juglayn dad shacab ahi oo u badan haween iyo carruur ay ku hayeen dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Galkacyo iyo qaar ka mid ah gobollada kale ee Puntland, waxaana wax laga saarayaa ku lug-lahaanshaha falalka amni darro ee muddooyinkii ugu danbeeyey ku soo kordhayey deegaannada Puntland gaar ahaan magaalada Galkacyo, inkastoo fakar kaa ka duwan maamullada iyo mas?uuliyiinta Puntland ay qabaan.
Mas?uuliyiinta sar sare ee maamulka Puntland ayaa arrintaas mawqif cad ka is-taagay, iyagoo sheegay in aan loo baahnayn arrimaha socda ee lagu colaadinayo dadka ka soo jeeda gobollada kale ee Soomaaliya gaar ahaann gobollada Baay iyo Bakool oo maalmahaan danbe ay si gaar ah u saarnayd diirradda dadka ka caraysan falalkii dhacay.
M/weynaha Puntland Dr. C/raxmaan Sheekh Maxamed ?Faroole?, kuxigeenkiise Gen. C/samad Cali Shire, guddoomiyaha baarlamaanka C/rashiid Maxmed Xirsi, qaar ka mid ah golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo sidoo kale mas?uuliyiinta maamullada iyo degmooyinka ayaa soo jeediyey baaqyo wax ku ool ah, oo ku saabsan in la joojiyo kala faquuqidda dadka ku dhaqan deegaannada Puntaland, taas oo ay ku micneeyeen in ay tahay arrin aan sinaba loogu baahnayn, meel ka dhacna ku ah siyaasadda Puntland ee ku salaysan baadi-goobka ururinta umadda Soomaaliyeed.
Waa markii ugu horraysay oo ay deegaannada Puntland ka dhacdo caro dad shacab ahi ay qaabaan ayna kaga xun yihiin dhibaatooyinka amni darro ee dilka iyo qarax iskugu jirta, isla markaana ay dusha u saaraan falalkaasi dadka ka soo jeeda gobollada kale ee dalka.
Ciyaartooyda gobolka Sool oo u gudbay finaalaha koobka gobollada Puntland, 2009.
?Khasaaraha ka dhashay qaraxii xalay ee Bossaso & madaxda Puntland oo oo ka digay takoor lagu sameeyo Somalida gobollada kale.